En vente actuellement 03/12/2018
Efa vita vaksiny, mbola mety ho voan’ny kitrotro ve ?
Antony iray mampihanaka ny aretina kitrotro ny tsy fanatonana mpitsabo avy hatrany raha vantany vao misy fambara hafahafa eo amin’ny marary.
Fomba fatorin’ny mpivady, mety mitantara olana
Manam-pahaizana siantifika maro no efa nanaporofo fa manambara izay tsy tenenin’ny vava ny fihetsika.
Krepy matevina amin’ny fraomazy sy épinara
Akora ilaina (ho an’olona 6) · Epinara efa masaka sy efa notetehina 250g · Fraomazy malemy 125g · Fraomazy 30g efa nokikisana · Dipoavatra efa nopotsehina · “Noix de muscade” efa voakiky · Fraomazy efa voakiky 25g · Paprika ½ sk · “Chapelure” 40g
. Panier isothermique 47cm – 35.000Ar -Boutique Azirka Rasalama Cont : 034 83 105 11 - 032 81 341 73 2. Mini barbecue pliable en malette – 55.000Ar - Boutique Azirka Rasalama Cont : 034 83 105 11 - 032 81 341 73
Frantsa : Hamoraina ny fampiasana ny « carte bancaire » hiantsenana amin’ny aterineto
Manandrana fomba vaovao manaraka ny teknolojia ireo banky ao Frantsa toa an’i Arkéa, BNP Paribas ary Société Générale amin’izao fotoana mba hiarovana ny fandoavam-bola amin’ny alalan’ny « carte bancaire »
Lehilahy 78 taona, namono olona manodidina ny 90 isa
Lehilahy 78 taona iray no nibaboka fa namono olona manodidina ny 90 tany Etazonia. Efa hatry ny ela no malaza any an-toerana ireny “tueurs en série” ireny.
Te hisintaka kely … inona no atao?
Rehefa betsaka loatra ny adin-tsaina atrehina eo amin’ny fiainana andavanandro na miatrika olana sarotra vahana dia mazana no te hiala lavitra izany olana izany ny olona iray. Sarotra ny manova fiainana sy mandao ny zavatra efa nitsangana teo amin’ny fiainanao. Rehefa tojo izany dia ilaina ny miala sasatra sy mieritreritra tsara.